(SAWIRRO) Shirkada Africa Project Group oo maanta lagu daah-furay magaalada Garowe. | puntlandi.com
Tuesday, November 14th, 2017 | Posted by P2
(SAWIRRO) Shirkada Africa Project Group oo maanta lagu daah-furay magaalada Garowe.
Garowe (Puntlandi) Waxaa maanta magaalada Garowe ee caasimadda Puntland lagu daah furay shirkad lagu magacaabo Africa Project Group (APG), oo ah shirkad ka shaqeysa dhismayaasha la talinta iyo ganacsiga.
Waxaa xaflada furitaanka shirkadaan ka qeyb galay masuuliyiin dowladdeed iyo Engineero ka socday shirkada dhismayaasha iyo Teknooloojiyada ee ka howlgalla Puntand.
Eng, Maxamed Cabaas Nuur oo xubin ka ah shirkaan ayaa sheegay Shirkani inay horey mashaariic dhismayaal ah kasoo hirgalisay wadanka dibadiisa, hadana usoo jeesatay inay Puntland ka hirgaliso dhismayaal casri ah oo aduunka la jaanqaadaya, iyagoo kaashanaya aqoontooda iyo qibradooda shaqo.
Eng, Maxamed Cabaas Nuur waxa uu sheegay shirkadaan inuu Puntland keenay ganacsade Saciid Cabdullaahi Deni oo horey Puntland uga hirgaliyay shirkado kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha dhismaha, sida shirkada Deni Engineering iyo shirkada Quality Control.
Daahir Kilwe oo kamid ah ganacsatada ayaa sheegay soo dhoweeyay shirkadaan, isagoo sheegay inay haatan u dhisayso hotel casri ah oo lagu magacaabo Safari, kaasoo laga dhisayo magaalada Qardho, wuxuuna hadalkiisa kusii daray in haddii la helo shirkado iyo Engineero aqoon u leh dhismayaasha casriga ah in wadanka maalgashiga lagu sameysan lahaa oo laga maarmi lahaa malagashiga dibada.
Wasiir ku xigeenka degaanka Puntland, Maxamuud Ciise, ayaa ugu dambayn ka hadlay furitaanka shirkadaan, wuxuuna cadeeyay inay tahay arrin loo baahan yahay in wadanku yimaadaan shirkado wax ka badela wajiga haatan dalku leeyahay gaar ahaan in laga gudbo sida haatan wax loo dhisto.
Ugu dambayn, shirkada Africa Project Group (APG), ayaa taliska ciidanka nabad gelyada waxay guddoonsiisay qalabka gaadiidka lagu kala hago, waxaana qalabkaas ka guddoomay taliyaha ciidanka nabad gelyada wadooyinka Puntland Kornayl Axmed Qalyare, isagoona mahad celin balaaran ujeediyay shirkadaan oo noqotay shirkadii ugu horeysay oo qalab nuucaan ah guddoonsiisa ciidanka taraafikada.
Dalladaha ururada bulshada Soomaaliya oo war murtiyeed kasoo saaray khilaafka barlamaanka Soomaaliya.